Beeralayda Deegaanka Garissa oo bilaabay inay ka faa&#039;iid... | Universal Somali TV
Beeralayda Deegaanka Garissa oo bilaabay inay ka faa'iidaystaan Nidaamka waraabka tamarta qoraxda ee Solarka oo loogu soo saarayo dhirta biyo lagu waraabiyo.
Qaar ka mid ah beeralayda ku dhaqan tuulada balij oo hoos tagta degmada Balambala ee Deegaanka Garissa Gobolka ay Soomalida degto ee Waqooyi Bari Kenya ayaa bilaabay inay ka faa'iidaystaan teknoolojiyada casriga ee Nidaamka waraabka tamarta qoraxda ee Solarka oo ah hab casri ah oo loogu soo saarayo dhirta biyo lagu waraabiyo.
Habkani wuxuu inbadan ka caawinayaa beeralayda ku nool deegaanka inay ka maarmaan energy-ga Korontada oo u baahan shidaal xajmigiisu aad u badan yahay iyo in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhanka beeraha.. Sababta ugu wayna ay tahay in tamarta qoraxda ee Solarka oo loo isticmaalo waraabka faa’iidooyin badan laga dhaxlo.
Gudoomiyaha gudiga beeralayda hogal jufaan Yacquub isaaq oo ka mid ah kuwa ka faa’iidaysatay nidaamka waraabka tamarta qoraxda ee Solarka oo u waramay warbaahinta Universal Tv ayaa ka warbixiyay caqabadaha ka haysta tacabka beeraha ay ka mid yihiin dhinaca waraabka iyo , sidoo kale faaidada ay ku qabaan nidaamka cusub.
Geesta kale qaar ka mid ah beeralayda wali ku tiirsan habka waraabka ee matoorka ayaa sheegay inay rajaynayaan mashruuc noocan oo kale uguna baaqay dawlada deegaanka iyo tan xukuumada dalka inay usoo gurmadaan oo ay garabsiiyaan si kor loogu qaado adeegsiga qalabkan beeraha lagu waraabiyo kuna shaqeeya cadceedda .
Beeralayda ayaa sidoo kale cabasha ka muujiyeen cayayaan fara'ba'an ku haya wax soo saarkooda iyagoona ka codsaday dawlada inay ku saacidaan daawooyinka lagu dabar gooyo cayayaanka.
Si kastaba ha ahaatee qalabkan beeraha waraabiya ee Soolarka ku shaqeeya ayaa u muuqda mid caawin kara beeraleyda iyo guud ahaan dadka deegaanka oo abaaro iyo roob la’aan ay soo wajahaan.
Waxaa intaadheer, tiro badan oo kamid ah beeraleyda deegaanka inaysan awood u laheyn in ay iibsadaan matoorada beeraha waraabiya si ay u isticmaalaan markii ay roob waayaan.
Qalabkan ayaana u muuqda mid yareyn kara qarashaadkii badnaa ee beeraleyda uga bixi lahaa matoorada , shidaalka iyo alaabaha uu matoorka u baahanyahay inta uu beerta waraabinayo.
Kan-xigaKenya :Beeralayda Deegaanka Garissa ...
Kan-horeCulumada Deegaanka Garissa oo maanta ...
40,691,958 unique visits